Oke Osimiri Baltic | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, General, njem
E jiri ya tụnyere mmiri na-ekpo ọkụ ma jupụta na mmiri nke Oké Osimiri Mediterenian, Oké Osimiri Baltic nwere ike iyi ka oyi, ebe dị anya na ebe a na-amaghị ama. Agbanyeghị, mmiri ya na-asa oke osimiri nke mba itoolu na Northern Europe na Central Europe. nke ahụ bụ ebe obibi maka oke osimiri zoro ezo mara mma, akụ ochie nke yiri ka ọ bụghị akụkọ, yana agwaetiti, àkwà mmiri na obodo mmiri ndị bụbu isi obodo azụmahịa nke ụwa.
Nyere ọnọdụ ya pụrụ iche, Stockholm nwere agwaetiti iri na anọ na otu ọnụ mmiri nke Oké Osimiri Baltic kpuchitere nke mmiri iri abụọ jikọtara. Taa ọ bụ obodo nke oge a nke teknụzụ, imewe, ejiji na nri mara mma riri ahụ, mana obodo ochie ya, bụ Gamla Stan, na-agwa anyị banyere oge gara aga site n'okporo ámá ya jupụtara na ya, ụlọ akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke XVIII na XIX, ụlọ ahịa ya, ụka ya na ụlọ ahịa ya ndị mara mma.
Ejiri ụkwụ kpuchie Stockholm. Gagharị na-enweghị isi n'okporo ámá ya na ịchọpụta ọbịbịa ndị ochie dịka ụlọ eze, Halllọ Nzukọ Obodo na ụlọ elu Stadshuset nke ị nwere echiche kachasị mma banyere obodo ahụ, Katidral Saint Nicholas, Ezumike Ezumike na ọtụtụ ebe ndị ọzọ.
Ebe oria ajuju nke Stockholm bu Vasterlanggatan, uzo di egwu nke juputara na ulo nri, veranda na ulo ahia nke ebe i nwere ike ichota gastronomy nke ime obodo ma nwee obi uto nke obodo. Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalitegharị ụzọ iji gaa ụfọdụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị ama na Stockholm dị ka ụlọ ngosi nka nke Abba ma ọ bụ ihe ngosi nka nke Vasa. Ọ bụrụ na ị nwere oge, ị nwekwara ike ịga nyochaa agwaetiti na-acha akwụkwọ ndụ nke Djurgarden ma ọ bụ hụ nnukwu ụlọ dị na mbara ụwa. Ihe dị egwu banyere ebe a bụ na n'ihi ihu ya, ị nwere ike ịga na iko gondola.
Isi obodo Finland jikọtara ya na Baltic wee nọrọ ọdụ na ọgba aghara nke mmiri, agwaetiti na oke osimiri ndị na-achọpụta ụsọ mmiri dị mgbagwoju anya.
Enwere ike ịchọta Helsinki n'ọtụtụ ụzọ, mana otu n'ime ihe kachasị mma bụ ịgbazite igwe ma pụọ ​​ma nyochaa n'okporo ámá ya site na pal. Otu nwere ike ikwu na amara nke obodo Finnish a dị na ihe nketa ọdịnala ya na ọdịbendị ya: Katidral Ọtọdọks Uspenski, Katidral Protestant na Senate Square, ụlọ Art Nouveau ma ọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya, ebe echekwara ihe nketa mba.
Obodo a nwere ọtụtụ veranda na ihe karịrị ebe ngosi ihe mgbe ochie 50 maka ihe ụtọ niile dịka Natural History Museum ma ọ bụ Ehrensvärd-Museum, nke dị n'ebe obibi mbụ nke ndị ọchịagha nke ebe ewusiri ike Suomenlinna, nke na-egosi anyị etu ndụ Finish dị ka ndị Finish laa azụ na narị afọ nke XNUMX. Nleta ọzọ dị mkpa na Helsinki bụ Suomenlinna, nke a na-akpọ ebe e wusiri ike nke Finland.
Ebe pụrụ iche ị ga-ahụ n’oge nleta isi obodo ahụ dị n’etiti, ama ama ama ama Kauppatori. Ebe dị ezigbo mma nke nwere ụlọ ifuru na nri dị ọnụ ala na ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-apụ ebe a.
N'ịbụ nke dị n'ụsọ Oké Osimiri Baltic, Pärnu bụ isi obodo dị n'akụkụ osimiri na obodo ndị Estonia na-eme njem. N'oge oyi ọ bụ obodo dị jụụ ebe ndị ọbịa na-eji azụ azụ ma ọ bụ skating skate eme ihe. Agbanyeghị, n'ụbọchị anwụ na-acha mgbe ihu igwe dị mma, ezinụlọ niile sitere n'akụkụ niile nke mba ahụ na ọbụlagodi site na Russia ma ọ bụ Finland gbara agbata obi na-abịa Pärnu ka ha dinara anwụ, na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-ezu ike mgbe ha na-enwe ọmarịcha ịma mma.
Ndị njem ndị ọzọ na-abịa Pärnu iji chọọ njem nlegharị anya ebe spa bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ndị njem. Ọtụtụ ndị chọrọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ mmiri nke apịtị dị ka peat Estonian nke etinyere ebe a. Ọ mejupụtara ngwakọta nke mmiri na agbata obi nwere ezigbo uru maka ahụ.
Nweghị ike ịhapụ Pärnu na-agaghị eleta agwaetiti agbata obi nke Muhu, nke ji ụgbọ ala were awa abụọ na ọkara wee laa. N'ebe a, ị ga - ahụ Estonia nke oge gara aga: ya na obere ụlọ ya na ụka nke Muhu, ndị kacha ochie na mba ahụ.
Agbanyeghị na UNESCO nwere ebe akụkọ ihe mere eme kwupụtara na World Heritage Site, nke kachasị na mba Baltic bụ otu n'ime obodo ama ama pere ama na kọntinenti ahụ. You maara na ọ bụ obodo nwere ọtụtụ ụlọ mara mma na mbara ụwa? Ihe karịrị ụlọ ndị ọgbara ọhụrụ 700!
Zọ kachasị mma iji mata Riga bụ ịgagharị n'okporo ámá ndị dị n'etiti etiti a na-akpọ Vecriga, bụ nke n'agbanyeghị na e bibiri ya ma mechaa wughachi ya na mmalite 90s, na-ejigide amara mbụ ya.
N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta ebe a maara dị ka Rastlaukums, ogige ime obodo, nke dị na Middle Ages na-ejibu ahịa n'agbanyeghị na a haziri asọmpi, asọmpi na ụdị mmemme ndị ọzọ. Arlọ Blackheads nke dị nso na nwanne nwanne Riga dị nso na square a. E bibiri ya na Agha Worldwa nke Abụọ ma wughachi ya na 1999.
Enwere ọtụtụ ihe ịhụ na Riga. Ihe omuma atu ozo banyere nke a bu ulo oru Riga nke malitere na narị afọ nke XNUMX, ebe ulo onye isi ala Latvia di. Anyị enweghị ike ichefu nnukwu square dị na obodo ochie ahụ, ya bụ, nke katidral ebe ụlọ nsọ kachasị ochie na Baltic dị ma bụrụkwa ihe ncheta ụlọ nke mba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oke Osimiri Baltic